Ma fiicantahay in lagu tababaro xargaha? | Ragga Stylish
Ku tababar tareenka
Haddii ay jirto hal shay oo qof jooga qolka jimicsigu neceb yahay, waa ku tababbar xargaha. Madax adayggu aad ayuu u xanuun badan yahay wuxuuna kaa horjoogsanayaa inaad isticmaasho xoogga aad u baahan tahay si aad ugu fuliso layliyada hawl maalmeedkaaga. Qalafsanaanta ayaa soo baxda iyada oo ay sabab u tahay dhaawaca muruqyada ee soo baxa inta lagu jiro kal-fadhiyada tababarka. Xanuunadan dartiis, dadku waxay la yaaban yihiin haddii tababarka qallafsanaantu ay caafimaad u noqon doonto jidhkeenna iyo in kale. Kuwa kale waxay doortaan inay yareeyaan mugga tababarka ama culeyska ay u adeegsadaan layliyada si aysan u dareemin xanuunkaas.
Ma rabtaa inaad ogaato inay wanaagsan tahay in lagu tababaro xargaha? Halkan waxaan kuugu sharxeynaa wax walba.
1 Maxay kabaha kabaha u soo baxaan?
2 Ahmiyada horumarka
3 Ma fiicantahay in lagu tababaro xargaha?
4 Maxaan ku tababbari karin xargaha ayaa ku tiirsan?
Maxay kabaha kabaha u soo baxaan?
Madax adaygu waa natiijada muruqyada oo waxyeellooba inta lagu jiro kal-fadhiyada tababarka. Markaan muruqyada ku xirno kicinta daran, waxaan u siideynaa lactic acid muruqeena sidii shey qashin ah ka dib dheef-shiid kiimikaadka muruqyada glycogen. Tani waxay keenaysaa isku-ururinta asiidhkan inay keento xanuun ka dib maalmaha soo socda. Caadi ahaan, xanuunka ugu badan wuxuu dhacaa marka qiyaastii 48 saacadood ay dhaafto jimicsiga jirka ka dib.
Maaha inay ahaato jimicsi culus oo keena xanuun. Si fudud, dadka aan u baran jimicsiga iyo, si lama filaan ah, waxaan u bilaabaynaa jimicsi jimicsi, waxay la kulmi doonaan xanuunka qallafsanaanta. Waxaa jira dariiqooyin loo maro Kabaha ka qaad laakiin had iyo jeer way fiicantahay inaadan haysan.
Dadka loo bartay inay jimicsi sameeyaan, haddii ay soo maraan tababar ka xoog iyo xoog badan sidii caadiga ahayd, waxay u geysan doonaan dhaawac muruq badan. Burburka fiilooyinkaasi waxay sidoo kale noo horseedi doonaan inaan yeelano xanuun badan markaan dhaqaajinayno iyo markaan shaqeyno. Si kastaba ha noqotee, ma aha sababtoo ah adkeysi ayaan leenahay waa inaan joojino tababarka ama aan ku qabanno culeys yar ama xoog badan.
Markii aan tababar ku qaadno xoogaa gaar ah iyo mug mug leh oo tababar ah oo ku habboon awoodeena, uma baahnin inaan yeelano qallafsanaan. Waa wax iska caadi ah in bilowga, aan leenahay daal iyo xanuun badan markii aan ka adkaaneyno iska caabbintaas oo ah culeysyada ama culeyska aan saareyno mashiinnada iyo walbahaarka. Dhanka kale, haddii mar kasta oo aan adkaano waxaan yareyneynaa mugga tababarka ama xooggeeda, Uma oggolaan doonno inaan ku abuurno is-waafajinta neerfayaasha jirka.
Tababarku wuu joogaa haddii aan marwalba sidan oo kale sameyno. Waxaa lagama maarmaan ah in la beddelo culeyska, ku celcelinta, xiisadda farsamo ee aan sameyno inta lagu jiro jimicsiga, wax laga beddelayo waqtiyada nasashada, iwm. Tababarka si loo siiyo natiijooyin. Haddii kale, kuma sii kori doonno ama ku sii socon doonno himiladeenna. Maskaxda ku hay in madax-adayggu uusan ahayn inuu xumaado ama wanaagsanaado.
Markaan kordhino heerka culeyskeena aan kusoo bandhigno mashiinada iyo inaan sare uqaadno, waa caadi in dhaawaca muruqyada uu kordho. Si kastaba ha noqotee, waa inaanan waligeen ka shaqeyn muruqyada. Cilladaha muruqyada waa soo noqnoqoshada aannan ku celin karin ku celin kale caawimaad la'aan. Haddii dhammaan taxanaha ama dhammaan jimicsiyada aan gaarno murqo-jab, waxaan kordhin doonaa walbahaarka muruqa uu kujiro inta lagu gudajiro kalfadhiyada waana daalidoonaa dhaqso. Kaliya maahan inay keento fiilooyin badan inay jabto oo waxyeeladoodu sii weynaato, laakiin soo kabashada ayaa gaabis noqon doonta, halista dhaawaca ayaa sii kordheysa xanuunna wuu muuqdaa.
Haddii aad ku tababaran jirtey jimicsi waqti dheer, waad la qabsan doontaa. Markasta oo culeyskaagu sii kordho, ayay dadaal badan qaadataa. Si kastaba ha noqotee, haddii aan sameyno kororka culeyska si tartiib tartiib ah, maahan inuu kordhiyo dhaawaca murqaha.
Si aad si fiican u fahamto, waxaan tusaale u soo qaadaneynaa. Ka soo qaad in aanu samaynaynay joornaal keyd ah mudo 3 usbuuc ah taas oo aan geynay wadar dhan 60 kg oo rar Haddii usbuuca afaraad aan dhigno 75 kg, wax badan ayaan kordhin doonnaa hal mar. Haddii aan rabno inaan ku qabanno tiro isku mid ah soo noqnoqosho iyo taxane leh culeyskaas, waxaan sababi doonnaa dhaawac murqo oo xad dhaaf ah, sidaa darteedna, qallafsanaan ayaa soo muuqan doonta. Ujeeddadu waa in la kordhiyo culeyskaas si tartiib tartiib ah si loo abuuro la qabsi.
Ma fiicantahay in lagu tababaro xargaha?
Markii aan wax isku mid ah qabanaynay in muddo ah (in ka badan ama ka yar 3 ama 4 bilood), waxaan ogaanay in jirkeennu gebi ahaanba la jaanqaaday oo uusan horumar ku filan sameynin. Waxay ku jirtaa kiiskan markaan bedeleyno jadwalkayaga si aan wax uga beddelno kicinta muruqyadeena ay helaan. Malaha, Maalmaha ugu horeeya ee aan fulino howlaha cusub waxay noqon doonaan kuwa adag.
Si kastaba ha noqotee, ku tababbarashada xargaha waa inaysan noqon wax dhibaato ah. Isku-diiran iyo fidin habboon, waxaan yareyneynaa xanuunka nabarrada. Haddii aan joojino tababarka ama aan yareyno mugga tababarka iyo xooggiisa si aysan u dhaawicin wax badan, waxaan ka dhigeynaa jirka inuusan la qabsan tababarkaas. Qaab noocan oo kale ah, haddii aan ku celcelino tababarkaas, waxaan mar labaad yeelan doonnaa adkaansho.
Waxaan sida caadiga ah ka soo kabannaa xargaha kabaha wax yar illaa 3-5 maalmood. Nabarrada oo aad u xanuun badan oo aan noo oggolaanayn inaan tababarno, waxay qaadataa waqti ka dheer si aan u tagno. Xaaladda aad ku leedahay madax adayg noocan ah, ka fikir inaadan ku celin tababarka sidan oo kale haba yaraatee. Maaddaama khibradda jimicsiga ay socoto, waxaan ula qabsannay la qabsiga mugga tababarka qaabkeena. Markii aan helno mugga saxda ah, ma lahaan doonno madax adeyg iyo xoogaa yar oo raaxo ama qallafsanaan yar maalmaha aan ku dabaqno culeys xad dhaaf ah.
Maxaan ku tababbari karin xargaha ayaa ku tiirsan?
Waxaa jira waqtiyo ay fiicantahay inaadan ku tababbarin xargaha. Kiisaskani waxay ku dhegan yihiin kuwa nabarrada dhabta ah ee xanuunka leh ee aan noo oggolaaneynin inaan sameyno nooc kasta oo dhaqdhaqaaqa aasaasiga ah. Markan, jidhku wuxuu na weydiinayaa nasasho buuxda si aan ugu soo kabano si tartiib tartiib ah.
Xaaladaha kale oo dhan, illaa iyo inta aan tababar qaadan karno, waxaa fiican in lagu sameeyo xawaare la mid ah had iyo jeer. Waxaa jira qaabab qaarkood oo looga caawin karo bogsiinta qallafsanaanta taasna waa iyadoo la yeesho diirimaad wanaagsan kahor howlaha joogtada ah, fidinta saxda ah ee kala-goysyada iyo muruqyada, iyo isticmaalka anti-inflammatory oo lagu yareeyo xanuunka.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad ku xallin doontid shakigaaga ku saabsan in tabobar lagu tababaro iyo in kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Fitness » Ku tababar tareenka